September 5, 2021 - Khitalin Media
September 5, 2021 by Khitalin Media
အချစ်က ထမင်းမကျွေးဘူး ဆိုတဲ့ (၂၁) ရာစုမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟဝင်ခံချက် ကျမချစ်သူကို ပြောခဲ့ဖူးတယ် ။ နောက် ၂နှစ်လောက်နေရင် ငါလက်ထပ် ဖြစ်လိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် ငါလက်ထပ်တဲ့သူက နင်ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်လိမ့် မယ် ။ နောက် ၂နှစ်လောက်နေရင် အဆင်ပြေတဲ့သူကို ငါ လက်ထပ်သွားမှာပဲလို့….။ ကြားကြားချင်းတော့ သူစိတ်ဆိုးတယ် ။ နောက်တော့ သူ လက်ခံသွားတယ် ။ ကျမဆိုလိုတာက မိန်းမတစ်ယောက် လက်ထပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ … အချစ်က အဓိကမကျတော့ဘူး | ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဆိုရင် တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ ။ ဒီလူကို တစ်သက်လုံး အားကိုးရတော့မှာ တစ်သက်တာ မှီခိုရတော့မှာမဟုတ်လား ။ အချစ်က ထမင်းမကျွေးဘူး ။ ကိုယ် ထမင်းအငတ်ခံနိုင် … Read more
DAILY NEWS မကြုံစဖူး မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးစံချိန်တင်ကျဆင်းနေတဲ့နယ်စပ်ဈေးကွက် September 2, 2021 – by mmdailylife – LeaveaComment မကြုံစဖူး မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးစံချိန်တင်ကျဆင်းနေတဲ့နယ်စပ်ဈေးကွက် လတ်တလောအခြေအနေအရမူဆယ်ငွေကြေးဈေးကွက်တွင်တရုတ်ယွမ်ငွေနှင့်လဲလှယ်ရာ၌ မြန်မာကျပ်ငွေဈေးနှုန်းမှာစံချိန်တင်နိမ့်ဆင်းလျှက်ရှိသည်ဟု ငွေလဲလှယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအပြောအရသိရသည်။မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်မူဆယ်မြို့တွင် ယနေ့စက်တင်ဘာလ ၁ရက်နေ့ငွေလဲနှုန်းအရတရုတ်ငွေယွမ်၁၀၀လျှင်မြန်မာကျပ်ငွေ၂၈၂၀၀ကျပ်ထိရောက်ရှိနေသည်။”ကျပ်ငွေဈေးကထိုးကျနေတယ်၊ တစ်ခါမှအဲဒီလောက်အထိမရောက်ဖူးဘူး”ဟုငွေလဲလှယ်သူတစ်ဦးကပြောပါတယ်။ယခင်ကတရုတ်ယွမ်ငွေ၁၀၀လျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ၂၀,၀၀၀ ဝန်းကျင်သာရှိခဲ့ပြီးကျပ်ငွေတန်ဖိုးတဖြေးဖြေးကျဆင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။မေလမှစ၍သိသိသာသာကျဆင်းလာခဲ့သောကျပ်ငွေတန်ဖိုးသည် သြဂုတ်လတွင်ယွမ်၁၀၀လျှင်မြန်မာကျပ်ငွေ၂၇,၂၀၀ထိ‌ဈေးပေါက်ခဲ့သည်။ယွမ်ငွေဈေးတက်လာသည့်အတွက် တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသည်လည်းဈေးနှုန်းများမြင့်တက်လျက်ရှိသည်။”အရင်က၈၀၀၀တန်တဲ့ပစ္စည်းကအခု ၁၂,၀၀၀ထိတိုးရောင်းရတယ်၊ အရင်ဈေးတိုင်းရောင်းရင်ငွေပြန်လဲတဲ့ခါတရုတ်ငွေကတက်နေတော့အဆင်မပြေလို့ဈေးတိုးရောင်းနေရတယ်”လို့ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးကဆိုပါတယ်။ Source:Mizzima မႀကဳံစဖူး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးစံခ်ိန္တင္က်ဆင္းေနတဲ့နယ္စပ္ေဈးကြက္ လတ္တေလာအေျခအေနအရမူဆယ္ေငြေၾကးေဈးကြက္တြင္တ႐ုတ္ယြမ္ေငြႏွင့္လဲလွယ္ရာ၌ ျမန္မာက်ပ္ေငြေဈးႏႈန္းမွာစံခ်ိန္တင္နိမ့္ဆင္းလွ်က္ရွိသည္ဟု ေငြလဲလွယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေျပာအရသိရသည္။ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔ေငြလဲႏႈန္းအရတ႐ုတ္ေငြယြမ္၁၀၀လွ်င္ျမန္မာက်ပ္ေငြ၂၈၂၀၀က်ပ္ထိေရာက္ရွိေနသည္။”က်ပ္ေငြေဈးကထိုးက်ေနတယ္၊ တစ္ခါမွအဲဒီေလာက္အထိမေရာက္ဖူးဘူး”ဟုေငြလဲလွယ္သူတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။ယခင္ကတ႐ုတ္ယြမ္ေငြ၁၀၀လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ၂၀,၀၀၀ ဝန္းက်င္သာရွိခဲ့ၿပီးက်ပ္ေငြတန္ဖိုးတေျဖးေျဖးက်ဆင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ေမလမွစ၍သိသိသာသာက်ဆင္းလာခဲ့ေသာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးသည္ ၾသဂုတ္လတြင္ယြမ္၁၀၀လွ်င္ျမန္မာက်ပ္ေငြ၂၇,၂၀၀ထိ‌ေဈးေပါက္ခဲ့သည္။ယြမ္ေငြေဈးတက္လာသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္လည္းေဈးႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။”အရင္က၈၀၀၀တန္တဲ့ပစၥည္းကအခု ၁၂,၀၀၀ထိတိုးေရာင္းရတယ္၊ အရင္ေဈးတိုင္းေရာင္းရင္ေငြျပန္လဲတဲ့ခါတ႐ုတ္ေငြကတက္ေနေတာ့အဆင္မေျပလို႔ေဈးတိုးေရာင္းေနရတယ္”လို႔ကုန္စုံဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးကဆိုပါတယ္။ Source:Mizzima
NUG ရဲ့ ရေဒီယို ထုတ်လွှင့်မှု့အစီအစဉ်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ တာဝန်နေရာ ကနေ ပါဝင်ကူညီအားဖြည့် လာခဲ့တဲ့ မြနှင်းရည်လွင်
မဂ်လာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ NUG ရဲ့ ရေဒီယိုထုတ်လွှင့် မှု့မှာ အစီအစဉ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ တာ ဝန်နေရာ ကနေ ပါဝင်ကူညီအားြ ဖည့် လာခဲ့တဲ့ မြနှင်းရည်လွင် ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ အမှန်တရား ဘက်ကနေ ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ ရပ်တည် ကြသူများထဲတွင် သရုပ်ဆောင် မြနှင်းရည်လွင် တစ်ယောက်လည်း ပါဝင် ခဲ့တယ်ဆိုတာ အားလုံးလ ည်းသိကြမှာပါ။ သူမက နွေဦးတော်လှန်ရေး အစပိုင်းတွင် လမ်းပေါ် ထွက်ပြီး ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့တာကြောင့် အာဏာရှင် လူတစ်စုမှ ပုဒ်မ ၅၀၅ က ဖြင့် တရားစွဲဆို အရေးယူ ခံထားရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလက်ရှိ အချိန်မှာတော့ ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ နေရာမှာ နေထိုင်နေပြီး တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲများအတွက် ကျရာ အခန်းကဏ္ဍကနေ … Read more
သူ ကိုယ့်အပေါ် အချစ်တွေ လျော့လာပြီဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်သော အချက်များ…
သူ ကိုယ့်အပေါ် အချစ်တွေ လျော့လာပြီဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်သော အချက်များ… တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချိန်မပေးတာတွေ များလာတဲ့အခါကျရင် ဆက်ဆံရေးတွေဟာ သွေးအေးသွားတတ်ပါတယ် ။ မအားလို့ . အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့. gameဆော့နေလို့. videoကြည့်နေလို့ . အဲ့လို မအားတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ များလာတာနဲ့အမျှ သိထားရမှာတစ်ခုက တစ်ဖက်က ကိုယ့်အပေါ် စိတ်တွေ ပြောင်းလဲသလို ဖြစ်လာနေပြီဆိုတာပါပဲ။ သံယောဇဉ်မပြတ်တဲ့သူကတော့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူအတွက် မရမက အချိန်ပေးပြီး ပြေးလာတွေ့နေအုံးမှာပါပဲ။ မိုင်ပေါင်းများစွာ ကွာနေတဲ့ ခရီးကိုတောင် ဖြတ်သန်းပြီး ကိုယ့်ဆီကို လာနေအုံးမှာ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း အချစ်တွေလျော့လာပြီဆိုရင်တော့ မအားဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ပစ်ထားတတ်တယ်။ အရင်လို သတိတရ messageတွေ ပို့ထားတာတွေ မရှိတော့ဘူး။ ဖုန်းလေးဆက်ဖို့အရေး video callလေး ခေါ်ဖို့အရေးမှာတောင် ဟိုရွှေ့ ဒီရွှေ့ … Read more
သင့်လက်ရှိ အချစ်ရေးက သင့်အတွက်စစ်မှန်တဲ့ အချစ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အချက်များ လောကကြီးမှာ အချစ်စစ်မှန်ရင် ပျော်ရွှင်မှုတွေချည်းပဲလည်း မဟုတ်ဘူး၊ အဆင်မပြေမှုတွေကိုလည်း မလွဲမသွေကြုံရတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အရာအားလုံး ပြီးပြည့်စုံတာမျိုးတော့ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အချစ်ကြောင့် ဘဝကပျော်ရွှင်မှုတွေ ပိုများလာတာမျိုးပဲ ပိုဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အချစ်ကြောင့် စိတ်ညစ်တာ၊ စိတ်ပင်ပန်းတာတွေပိုများနေရင် အဲ့ဒါက အချစ်စစ် မဟုတ်နိုင်ပါဘူးနော်။ (၁) အရာရာ တစ်ဖက်သတ်ဖြစ်နေတာအချစ်စစ်မဟုတ်ဘူးချစ်တယ်လို့ ပါးစပ်ကတဖွဖွပြောပေမယ့် လက်တွေ့မှာကိုယ့်အတွက်မစဉ်းစားပေးတာ၊ ကိုယ့်အတွက်မကြည့်တာ၊ တစ်ဖက်ကအမြဲသည်းခံပြီး၊ တစ်ဖက်ကအမြဲအနိုင်ယူနေတာမျိုးကို စစ်မှန်တဲ့အချစ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ အချစ်စစ်ဆိုတာက နှစ်ဖက်မျှတမှု ရှိပါတယ်။ (၂) အောက်ကျို့တောင်းပန်နေရတာ အချစ်စစ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်ဖို့၊ ကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားပေးဖို့၊ ကိုယ့်အတွက်ကြည့်ပေးဖို့အောက်ကျို့တောင်းပန်နေရတာမျိုး၊ မလုံခြုံတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဖြစ်စေတာမျိုးက အချစ်စစ် မဟုတ်ပါဘူး။ အချစ်စစ်က ဂရုစိုက်ဖို့တောင်းဆိုစရာမလို၊ အောက်ကျို့နေစရာမလိုဘဲ၊ လုံခြုံတဲ့ခံစားမှုကို ဖြစ်စေတာမျိုးပါ။ (၃) အမြဲတမ်းငိုကြွေးနေရတာအချစ်စစ်မဟုတ်ဘူး အချစ်ကတခါတရံသင့်ကိုဝမ်းနည်းစေပေမယ့် အမြဲတမ်းတော့ ဝမ်းနည်းစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ … Read more
သင့်ချစ်သူက သင့်ကို တကယ်ဂရုစိုက်တာလား ထိန်းချုပ်နေတာလားဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အချက် (၈) ချက် ဂရုစိုက်တာနဲ့ လိုက်ပြီး ထိန်းချုပ်ခြင်းတွေရဲ့ကြားမှာ စည်းလေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုကြားထဲက မတူညီခြင်းကို ကောင်းကောင်း သိသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ချစ်သူရဲ့ ဂရုစိုက်တာတွေ၊ ပြောဆိုတာတွေက သင့်အတွက် မွန်းကျပ်လာပြီ ဆိုကတည်းက သင်ထိန်းချုပ်ခံနေရပြီလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုအချက်တွေက ထိန်းချုပ်နေလဲ ဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ၁။ ကိုယ်ကပဲ အမြဲတမ်း အရှုုံးပေးနေရတယ်။ သင်ဟာ တစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်ဖို့အတွက် သင့်ချစ်သူနဲ့ တိုင်ပင်ပေမယ့်လည်း သူကလက်မခံဘဲ သူ့အကြံကိုသာ လက်ခံရမယ်လို့ ပြောနေရင်တော့ ချစ်သူကောင်းတစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့်ချစ်သူကောင်း တစ်ယောက်ကတော့ သင်ပြောပြတဲ့ အကြံဉာဏ်ကို လက်ခံပြီးတော့ မှားနေရင်လည်း မှားတဲ့နေရာကို ထောက်ပြပြင်ပြပေးမှာပါ။ သင်ပြောတာကို လက်မခံ … Read more
ရင်သားသေး လို့ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ (ယောကျင်္ားလေးများ မဖတ်ရန်)
မိန်းကလေးတွေအတွက် ရင်သားအလှဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တာ ယောကျၤားတွေအတွက်လား။ အဲဒီလိုတွေးလို့လဲ မရပြန်ပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် မိန်းကလေး ပီသတယ်ဆိုတာကို ဖော်ကြုးနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါ။ ဒါပင်မဲ့ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ရင်သားကသေးခဲ့ရင်ကောင်း ကောင်းချက်တွေရှိပါတယ် ★ ယောကျၤားလေးတွေနဲ့စကားပြောနေချိန်မှာ သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကို ဂရုစိုက်စရာမလိုပါ။ ★ ကားစီးတဲ့အခါ ခါးပတ်ပတ်ရင်လည်း သာသာယာယာပါပဲ။ ★ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အတွင်းခံလေးတွေကို ကြိုက်တာရွေးနိုင်တယ်။ ★ ပတ်ဝန်းကျင်ကလဲ သူလေးက လိမ္မာတဲ့ကလေးလို့ အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ★ Gym သွားကစားတော့လည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သွားကစားနိုင်တယ်။ ★ စားရင်းသောက်ရင်း အမှတ်မထင် ပါးစပ်ကနေကျသွားရင်လည်း အကျၤီပေစရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ★ ရင်ဟိုက်အကျၤီကို ဝတ်ရင်လည်း ပြသာနာမရှိ။ ★ တီရှပ် အကျၤီဝတ်လည်း ကြောက်စရာမလို၊ ပေါ့ပေါးပါးပါး ဝတ်နိုင်တယ်။ … Read more
သင့်လက်ထဲမှာပိုက်ဆံမပြတ်အောင် သေချာပေါက် ငွေစုမိစေမည့် နည်းလမ်း (၄) မျိုး
တစ်လတာဝင်ငွေကို စုမိဖို့နေနေသာသာ လကုန်ခါနီးတာနဲ့ လက်ထဲငွေမလောက်တာမျိုး ကြုံကြိူက်ဖူးမှာပါ။ ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက် ငွေယိုပေါက်တွေကို သေချာရှာဖွေပြီး လစဉ်စုမယ့်ငွေပမာဏကို (အနည်းအကျဉ်းဖြစ်စေ)သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။ မြင်သမျှ ဝယ်ချင်နေပါက သင် တပြားမှ စုမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ငွေကိုစုဆောင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်…(1) ၅၀/၃၀/၂၀ နည်း – ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိပေမယ့် ငွေမစုမိသူများအတွက်သာရည်ရွယ်ပါတယ် …။ သင့်တစ်လတာဝင်ငွေကို ၃ ပုံခွဲလိုက်ပါ …။၅ဝရာနှုန်းကို လစဉ်ကုန်ကျစရိတ်အတွက် (ထမင်းစရိတ်၊ အိမ်စရိတ် ၊ဘေလ်စသည်) ဖယ်ပါ …။၃ဝရာနှုန်းကို သိပ်အရေးမကြီးပေမယ် လိူအပ်သောအရာများအတွက်သုံးစွဲပါ (အဝတ်အစား၊ အသုံးအဆောင်)၂ဝရာနှုန်းကို အနာဂတ်အတွက်စုဆောင်းပါ …။ (2) ရိုးစင်းသောနည်း – တအားစစ်စစ်စီစီ မစုချင်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် …။ လစဉ်ဝင်ငွေကို ၂ပိုင်းခွဲလိုက်ပါ။တစ်ပိူင်းကိူ မဖြစ်မနေသုံးရမယ့်အရာတွေအတွက်ဖယ်ပါ။ နောက်တစ်ပိုင်းကို သင့်သွားလာလည်ပတ်စရိတ်၊ အပျော်အပါးကိစ္စများအတွက် ထားပါ။ အပျော်အပါးမက်သူများအတွက် မစုဖြစ်ရင်တောင်မှ … Read more
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ အသက် ၂၅နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးသည် အိမ်ထောင်သည်တစ်ဦးဖြစ်ကာ သမီးလေးတစ်ယောက်မွေးဖွားပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် စကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ကြရာကနေ ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ကြသည်။ မိန်းကလေးအဖို့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် ကြင်ဖော်မဲ့ကလေးအမေတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်ဖို့က ခက်ခဲလွန်းခဲ့သော်လည်း ဘယ်လိုမှသည်းမခံနိုင်တော့၍ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် ပြတ်ပြတ်သားသား ကွာရှင်းကာ မိဘအရိပ်အောက်သို့ ပြန်ခိုလှုံခဲ့သည်။ ထို့နောက် မိန်းကလေးသည် သူမဧ။်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကို သမီးလေးသာ ပထမဦးစားပေးအဖြစ် ထားရှိကာ အလုပ်တွေကြိုးစားလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် အလှအပရေးရာနှင့်ပက်သက်ပြီး အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မိန်းကလေးသည် ကလေးအမေသာဖြစ်နေသော်လည်း နုပျိုလှပနေဆဲဖြစ်ပြီး သမီးလေးမှာလည်း နတ်သမီးလေးတစ်ပါးလို ချစ်စရာကောင်းနေတာကြောင့် လက်ထပ်ပြီးတာဝန်ယူချင်နေသည့် ယောကျာ်းလေးများမှာ တန်းစီနေခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း မိန်းကလေးသည် သူမဧ။် ရှေ့ရေးအနာဂတ်ကို သမီးလေးနှင့်သာ ဖြတ်သန်းလိုပြီး ကျန်တာမလိုအပ်ကြောင်းဆိုခဲ့ပြီး ချစ်ရေးလာဆိုသူများကို ငြင်းလွှတ်ခဲ့သည်။ Hlaing (Love Feeling) zawgyi လက္ထပ္ခ်င္တဲ့သူမ်ား တန္းစီေနေသာ္လည္း … Read more
ခြေထောက်တစ်ဖက်တည်းသာရှိပေမယ့် ကိုယ့်ဘဝကို ယုံကြည်ချက်အပြည့်နှင့် ကြိုးစားရပ်တည်လာခဲ့သော အလှမယ်လေး
ခြေထောက်တစ်ဖက်တည်းသာရှိပေမယ့် ကိုယ့်ဘဝကို ယုံကြည်ချက်အပြည့်နှင့် ကြိုးစားရပ်တည်လာခဲ့သော အလှမယ်လေး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ Be Thi Bangအမည်ရှိသော အသက် ၃၈နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ခြေထောက်တစ်ဖက်တည်းသာရှိပြီး လူအများကြားထဲ သွားလာသည့်အခါ အာရုံစူးစိုက်မှုများစွာ ခံခဲ့ရပါတယ်။ အမျိုးသမီးဟာ တစ်ချိန်က ဒေသရှိအလှပြင်ဆေးခန်းတစ်ခုတွင် ဝန်ထမ်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး လမ်းတွင်ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ခဲ့၍ သူမခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ဖြတ်တောက်ခဲ့လိုက်ရတာပါ။ အမျိုးသမီးသည် သူမရဲ့ကျန်နေတဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကို ဝှီးချဲလ်လေးနှင့် နေသွားရတော့မည်ကို တွေးမိတိုင်း စိတ်ဓာတ်တွေကျကာ ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖြစ်ခဲ့သော်လည်း အနားတွင် မိဘနှစ်ပါးနှင့် သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေဆီက အားပေးမှုများစွာ ရရှိခဲ့သည့်အတွက် အရှုံးမပေးပဲ ပြန်လည်ကြိုးစားအားထုတ်ချင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးဟာ တစ်သက်လုံး ဝှီးချဲလ်လေးပေါ်မှာ နေမည့်အစား ချိုင်းထောက်နှင့်အတူ ပြန်ထနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ပြီး မသန်စွမ်းအလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွင်လည်း ပထမဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့လာရောက်လည်ပတ်သော ဂျာမန်အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး ချစ်ကြိုက်ခဲ့ရာကနေ … Read more